ဗန်ကူးဗားကျွန်း - ဝီကီပီးဒီးယား
49°38′N 125°42′W﻿ / ﻿49.633°N 125.700°W﻿ / 49.633; -125.700ကိုဩဒိနိတ်: 49°38′N 125°42′W﻿ / ﻿49.633°N 125.700°W﻿ / 49.633; -125.700
၃၁,၂၈၅ km2 (၁၂,၀၇၉ sq mi)
၂,၁၉၅ m (၇၂၀၁ ft)
၂၃.၉၄ /km၂ (၆၂ /sq mi)
ဗန်ကူးဗားကျွန်း၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ကနေဒါ၏အစိတ်အပိုင်း ပြည်နယ်ဖြစ်သည့် ဗြိတိသျှကိုလံဘီယာတို့တည်ရှိသည်။ ကျွန်း၏အရှည်မှာ ၄၆၀ ကီလိုမီတာ (၂၉၀ မိုင်)ဖြစ်ပြီး အကျယ်မှာ ၁၀၀ကီလိုမီတာ ( ၆၂မိုင်) နှင့် ဧရိယာအကျယ်အဝန်းမှာ ၃၂၁၃၄စတုန်းကီလိုမီတာ ( ၁၂,၄၀၇စတုရန်းမိုင်)ရှိသည်။ ထိုကျွန်းသည်အမေရိကတိုက်အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းတွင် အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်။
ဗန်ကူးဗားကျွန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် ရွှေမြင်း ကဲ့သို့သောတောင်တန်းများပါရှိသည်။
ဗန်ကူးဗားကျွန်းကို မီးတောင် နှင့် အနည်ကျကျောက် များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီးယခုပျောက်ကွယ်သွားသော ကူလာ သမုဒ္ဒရာကျောက်တန်း ပေါ်တွင်ကမ်းလွန်တွင်ဖွဲ့စည်း ထားသည် ။ 55 ခန့်လောက် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းသန်းတစ် microplate သည့်လူမျိုးများအားကုလပြား၏ subducted အောက်က မြောက်အမေရိက တိုက်ကြီးရဲ့ margin အကြီးအ strain အတူ။ ထို့ကြောင့်ကူလာပြား၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခု ကိုမြောက်အမေရိက၏အနောက်ဘက်စွန်းတွင် စုဆောင်းပြီး ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ ဤ မြေ မျက်နှာသွင်ပြင်များသည်ကူလာပြားဆက်လက်ဆက်လက်မှုအောက်မှ အပြင်းအထန်အပြင်းအထန်တိုက်ခတ် ခံရခြင်းကြောင့် အင်ဆူလင်တောင်တန်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Strathcona Park ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိတောင်တန်းဒေသအများစုသည် tholeiitic ခေါင်းအုံး နှင့် breccias အစဉ်လိုက်ဖြစ်သော Karmutsen ဖွဲ့စည်းခြင်း ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဗန်ကူးဗားကျွန်းတစ်ဦးဖြစ်လာသည်ကတည်းက accretionary သပ် မြောက်အမေရိကတိုက်ကြီးရက်နေ့တွင်, လူမျိုးများအားကုလပြားအပြည့်အဝပြုလုပ်နှင့်များ၏အကြွင်းအကျန်အောက် subducted ထားပါတယ် Farallon ပြား ခြင်း, Juan က de Fuca ပြား, ယခုကျွန်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော subducting နေကြသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဗန်ကူးဗားကျွန်းသည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုအရှိဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်း၏ကမ်းခြေရှိ subduction ဇုန် သည်မီးကွင်း ၏အပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဧရိယာအိမ်ရှင်သိထားပြီး megathrust ငလျင် ကနောက်ဆုံးသည့်ဖြစ်ခြင်း, အတိတ်ကာလ 1700 ၏ Cascadia မြေငလျင် ။ ဗန်ကူးဗားကျွန်းတောင်တန်း ၏အရှေ့ဘက်ရှိ တားမြစ်ထားသည့်ကုန်းပြင်မြင့် သည် ၁၉၄၆ ဗန်ကူးဗားကျွန်းငလျင် ၏ ဗဟိုချက် ဖြစ်ပြီး ၇.၃ မှတ် ပမာဏအတိုင်းအတာအတိုင်းအတာဖြင့် ကနေဒါနိုင်ငံတွင်အများဆုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
↑ Sub-provincial Population Estimates. Archived 15 August 2019 at the Wayback Machine. BC Stats. Retrieved 2020-01-24.
↑ Regional Geography – Vancouver Island, BC – Destination BC – Official Site။ 8 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗန်ကူးဗားကျွန်း&oldid=699270" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။